Oovimba bezibulala-zinambuzane- Ilungelo lase-US lokwazi
(Ukuhlaziywa ngoFebruwari 17, kongeza ukugxeka isifundo) Iphepha elitsha lenzululwazi elivavanya iimpembelelo ezinokubakho kwezempilo zeRoundup herbicides zifumene amakhonkco phakathi kokuvezwa kukhemikhali wokubulala ukhula ...
(~ # ~) Hlaziya (~ # ~) -Kwinyanga kaFebruwari, malunga nenyanga emva kwengxelo kutyhile ubungozi bendlela yesityalo se-AltEn sokusebenzisa imbewu enyangwa ngesibulali zinambuzane, abalawuli belizwe laseNebraska bayalele isityalo ...
Isifundo esitsha sezilwanyana liqela labaphandi baseYurophu lifumanise ukuba amanqanaba asezantsi okubulala ukhula kwimichiza ye-glyphosate kunye nemveliso esekwe kwi-glyphosate esekwe kwimveliso yeRoundup inokutshintsha ukwakheka kwamathumbu ...
Iqela labaphandi baseTshayina lifumene ubungqina bokuba iimveliso zeherbicide ezisekwe kuthengiso lweglyphosate ziyingozi kwiinyosi zobusi okanye ngaphantsi kwezindululo ezicetyiswayo. Kwiphepha elipapashwe kwi ...
Nge-10 kaJanuwari, i-Guardian yapapasha eli bali malunga noluntu oluncinci lwasemaphandleni lwaseNebraska olunobunzima kangangeminyaka emibini ubuncoliso luboshwe kwimbewu yombona egutyungelwe yinyani. I ...
Amaphepha enzululwazi asandula ukupapashwa abonisa ubume obuninzi bokhula olubulala ikhemikhali i-glyphosate kunye nesidingo sokuqonda ngcono ukubonakaliswa kwento yokubulala izinambuzane eyaziwayo kunokuba ...
Uphando olutsha longeza ubungqina obukhathazayo kwiinkxalabo zokuba ukusetyenziswa kweekhemikhali glyphosate ezisetyenziswa kakhulu kunokuba nakho ukuphazamisa iihomoni zabantu. Kwiphepha elipapashwe kwi ...
Kuthunyelwe kwasekuqaleni ngoMeyi 2019; Ukuhlaziywa ngo-Novemba ngo-2020 Kule posi, i-US Right to Know ilanda umkhondo wenkohliso eluntwini ebandakanya iifemu ze-PR ezinamandla kwezolimo iBayer AG neMonsanto ...
I-Chlorpyrifos, iyeza lokubulala izitshabalalisi elisetyenziswa kakhulu, linxibelelene kakhulu nomonakalo wobuchopho ebantwaneni. Ezi kunye nezinye izinto ezixhalabisayo kwezempilo zikhokelele amazwe aliqela kunye namanye amazwe aseMelika ukuba avalise ii-chlorpyrifos, kodwa ...